War Deg Deg Ah Xukuumada Soomaaliya oo shaacisay Tirada Dadka ajaaniibta ah ee ku dhintay Weerarkii UNDP ee Moqdisho ka dhacay	| Salaan Media
War Deg Deg Ah Xukuumada Soomaaliya oo shaacisay Tirada Dadka ajaaniibta ah ee ku dhintay Weerarkii UNDP ee Moqdisho ka dhacay
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo amniga Qaranka Soomaaliya C/Kariin Xuseen Guuleed oo goordhaw Shir Jaraa’id qabtay ayaa faah faahin ka bixiyay Qasaarihii ka dhashay Weeraradii ismiidaaminta ahaa iyo dagaalkii ka dhacay Xarunta Hay’ada Qaramaa Midoobay ee UNDP.
Wasiirka ayaa sheegay in Weerarkii Maanta lagu qaaday Xarunta UNDP ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa ilaa 14-qof oo afar kamid ah dadkaasi yihiin ajaaniib aan Soomaaliya u dhalan inkastoo Wasiirku uusan shaacin dalalka ay u dhasheen waxaa sidoo kale Weerarkaasi ku dhaawacmay dad gaaraya ilaa 18-qof sida uu Wasiirku xusay.
C/Kariin Xuseen Guuleed ayaa intaa ku daray in raga Weerarka fuliyay ee Shabaab katirsanaa tiradooda aheyd ilaa 7-nin oo aad u hubeesnaa kuna kabisnaa dareeska Ciidanka Dowlada kuwaa uu sheegay in qaarkood nolosha lagu toogtay halka kuwa kalana ay qarxeen.
Wararka qaar ee la helayo ayaa sheegaya in qasaaraha uu intaas ka badan yahay dadka ajaaniibta ah ee dhintayna ay ku jiraan rag Cadaan ah aan la ogeyn dhalashadooda waxa ay tahay , waxaana dhaawcayada ka dhashay Weerarkii ismiidaaminta ahaa lagu daweenayaa isbitaalka Ciidamada AMISOM ee ku yaala Xarunta Xalane iyo Isbitaalada kale ee Magaalada Muqdisho.
Weerarka Maanta lagu qaaday Xarunta UNDP ee Magaalada Muqdisho ayaa u muuqaal ekaa mid bilo kahor ka dhacay Xarunta Maxkamada Gobolka Banaadir kaa ay shabaabku u adeegsadeen qaraxyo iyo Weeraro toos ah oo ka dhacay gudaha Xaruntaasi.